Football Khabar » ‘निराशा’बीच बार्सिलोनालाई बेन्जेमाको कडा चुनौती !
‘निराशा’बीच बार्सिलोनालाई बेन्जेमाको कडा चुनौती !
स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा गत राति रियल मड्रिड कमजोर टिम आरसिडी मालोर्सासँग उसको घरमा १–० ले पराजित भयो । खराब प्रदर्शन गरेको रियलले आफ्नै गल्तीले गोल खाएपछि पुनः खेलमा फर्किन सकेन । र, महत्त्वपूर्ण ३ अंक गुमायो ।
सो हारपछि रियलले लिगको शीर्ष स्थानसमेत गुमाएको छ । उसको हारसँगै बार्सिलोना यो सिजन पहिलोपटक ला लिगाको शीर्ष स्थानमा रहन सफल भएको छ । सो खेल जितेको भए रियल शीर्ष स्थानमा यथावत रहेन थियो ।
सो खेलपछि रियलका फ्रेन्च फरवार्ड केरिम बेन्जेमाले एक हारले सिजन नसकिने बताएका छन् । खेलपछि मिडियासँग बोल्दै उनले मालोर्सासँग आफूहरूले खराब फुटबल खेले पनि आफूहरूको यात्रा नसकिएको बताए । ‘हामीले आज साँच्चै खराब खेल्यौं । हामीले यो हार्नुपर्ने खेल थिएन,’ बेन्जेमाले भने, ‘तर, यो हारले सिजन सकिँदैन । लिगमा अझै थुप्रै खेल बाँकी छन् । हामी पुनः आफ्नो स्तरमा फर्किन्छौं ।’
बेन्जेमाले बार्सिलोना १ अंकले अगाडि रहनु ठूलो अन्तर नभएको पनि बताए । उनले घुमाउरो पारामा सिजनका दुई इएल क्लासिकोबाट अंक खोस्ने दाबी गरे । ‘हामीले नजित्दा उनीहरू लिग लिडर बनेका छन् । तर, १ अंक ठूलो कुरा होइन,’ बेन्जेमाले भने, ‘बार्सिलोनासँग हामीले अझै दुई खेल खेल्न बाँकी नै छ ।’
लिगका ९ खेलपछि बार्सिलोना १९ अंकका साथ शीर्ष स्थानमा छ । ९ खेल नै खेलेको रियल १८ अंकका साथ लिगको दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।
प्रकाशित मिति ३ कार्तिक २०७६, आईतवार १७:४०